Kidnapping tany Toamasina - Nahazo fahafahana vonjimaika i Manantena Hajanirina Dina na teo aza ny fanakanan'ny fampanoavava - Taratra 27 mars 2019 - Madagascar : la corruption au sein de la Justice illustrée par les articles de presse
Accueil Dysfonctionnement de l'appareil judiciaire malgache Kidnapping tany Toamasina – Nahazo fahafahana vonjimaika i Manantena Hajanirina Dina na...
Nomen’ny fitsarana Ambony Toamasina fahafahana vonjimaika i Manantena Hajanirina Dina, afakomaly na teo aza ny fanakanana nataon’ny fampanoavana amin’ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Toamasina…
Niala tao Toamasina ary niakatra aty an-drenivohitra ity mpanao politika voasaringotra ary voarohirohy ho atidohan’ny “kidnapping” ao Toamasina. Nilaza ireo olona akaiky ity lehiben’ny mpanao “kidnapping” ity fa samy tsy nanampo izao nahazoany fahafahana vonjimaika ka nivoahany ny fonjan’Ambalatavoahangy izao. Etsy ankilan’izany kosa, mihorohoro tanteraka ny fianakavian’ilay teratany karana antsoina hoe Mohamed Arman Kamis, karana mpandraharaha tompon’ny orinasa tsy miankina “trans Fy” izay nalain’ireo jiolahy an-keriny ny volana novambra 2018 lasa teo tao amin’ny toeram-piasany ao Ampasimazava Toamasina. Voalazan’ny zandary fa isan’ireo atidoha nikotrika ity raharaha fakana an-keriny ity i Manantena Hajanirina Dina. Avotry ny zandary teo am-pelatanan’ireo mpaka an-keriny kosa ity teratany karana ity, ny 26 novambra 2018 tao Mangarano faharoa ka nanao tohivakana ny fisamborana taorian’izay. Vokany, voasambotra tany Antsirabe ny 29 novambra 2018 i Manantena izay nohamafisin’ny zandary fa tena lehiben’ireo mpaka an-keriny. Niakatra teny anivon’ny fitsarana ambaratonga voalohany ny raharaha ka naiditra am-ponja vonjimaika izy taorian’izay. Nanitrikitrika ny tonian’ny mpampanoa lalàna eo anivon’ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Toamasina, Rajaonah Thierry tao amin’ny lapan’ny fitsarana ambony Toamasina, ny 7 desambra 2018 fa tsy hamela fotsiny izao fahafahana vonjimaika ho an’ireo mpaka an-keriny.
Basy sy bala tao amin’ny sekolin’ny zandarimaria Ambositra…
Tratra niaraka tamin’ireo jiolahy ny fitaovam-piadiana mahery vaika izay voalazan’ny zandary fa basy sy bala isan’ireo very tao amin’ny sekoly zandarimariam-pirenena ao Ambositra. Tsy mbola notsaraina ity raharaha ity saingy izao izy nahazo fahafahana vonjimaika izao. fantatra fa kandidà depiote mpisolo toerana ao amin’ny distrikan’Ifanadiana i Manantena Hajanirina Dina amin’ny fifidianana solombavambahoaka izay hatao ny 27 mey 2019 ary lisitra tsy miankina no irotsahany. Nahavariana ny rehetra ihany ny nahatafiditra azy tao anatin’ny lisitr’ireo ho fidiana. Fantatra fa efa misy ny fitoriana manafoana ny filatsahan-kofidiany ihany kioa eny amin’ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana (HCC).
Kandida depiote atidohana kidnapping tany Toamasina – Nomena fahafahana vonjimaika i Hajanirina – Tia tanindrazana du 27 mars 2019
Article précédentDeux présumés complices de Claudine Razaimamonjy dans des affaires de marchés fictifs incarcérés – Expressmada du 27 mars 2019
Article suivantRapt à Tamatave – Le cerveau présumé candidat à la législative libéré par la chambre d’accusation – Expressmada du 27 mars 2019
Antananarivo. Vehivavy mpitsara manala-baraka ny mpitsara malagasy rehetra ! hoy Antsa...
L’état désastreux des conditions carcérales à Madagascar par Me Olivia RAJERISON...
RAMBELO Volatsinana, juge du fond du tribunal correctionnel d’Antananarivo, accepte l’action...